Andro: 22 mey 2020
Ny IETT dia hanohy ny fitaterana mandritra ny fialantsasatra. Amin'ny andro firavoravoana izay hampiharana ny curfew dia handeha amin'ny mpandeha ny mpandeha araka ny fandaharam-potoana ny asabotsy amin'ny sabotsy sy amin'ny andro hafa araka ny fandaharam-potoana ny alahady. Ho an'ny hopitaly [More ...]
Ny monisipaly Ankara Metropolitan dia nahavita ny fiomanana amin'ny Eid al-Fitr. Raha ny asa fanadiovana dia tanterahina any am-pasana ankoatry ny arabe sy ny arabe eto an-drenivohitra, ny ekipan'ny Departemantan'ny Polisy dia mizaha sakafo indrindra ho an'ireo orinasa manao tsindrin-tsakafo. [More ...]
Ahoana ny fomba fitateram-bahoaka any Ankara mandritra ny 4 andro?
Raha ny fepetra raisina ho fanoherana ny valan'aretina coronavirus (Covid-19) dia hapetraka ny 23 fanao amin'ny 26-2020 Mey 21.05.2020, araka ny fanapahan-kevitry ny governemantam-paritany Ankara, HIFZISSIHHA, voafatotra 2020 ary niisa 37/XNUMX. [More ...]
Atombohy ho an'i Turkey ..! Homena serasera Covid-19 ny seranam-piaramanidina
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Adil Karaismailoğlu dia nilaza fa nandrava fepetra isan-karazany ny Ministera rehetra amin'ny ady amin'ny fihanaky ny Covid-19 izay nanomboka tany Chine ary lasa areti-mifindra tany amin'izao tontolo izao. Ny fitaterana ary amin'izao fotoana izao [More ...]
Lisitry ny bus amin'ny tolotra amin'ny famerana 4 andro ao Antalya
Tao anatin'ny sakeli'ny ady tamin'ny fipoahan'ny coronavirus, taorian'ny nanambarana ilay curfew tamin'ny 23-24-25-26 Mey, nandritra ny Ramadany, ny Kaomina Metropolitan dia nahavita ny fepetra sy fanomanana ilaina. Ny ben'ny tanàna Metropolitan Muhittin Böcek, nitsoaka ny Ramadany [More ...]
Mpitsara bibikely mandinika rafitra fiaran-dalamby faha-3
Ny ben'ny tanànan'i Antalya Metropolitan Muhittin Böcek dia nandinika ny asa vita amin'ny fotodrafitrasa ao amin'ny Meltem Boulevard ao anatin'ny ambaratongan'ny Tetikasa rafitry ny lalambe faha-3. Mahazo fampahalalana momba ny fanadihadiana mitohy, ny Filoha Insect, [More ...]
Tsy fandalovana amin'ny fiantsonana tsy misy diso ao Izmit
Ny ekipan'ny Departemantan'ny Polisy ao amin'ny Kocaeli Metropolitan dia miasa mafy hiantoka ny filaminana sy ny filaminam-bahoaka any amin'ny faritra maro eto an-tanàna. Ny ekipa mpitandro filaminana mifehy ny fifamoivoizana dia tsy manakana ny fitohanan'ny fifamoivoizana manerana ny tanàna [More ...]
Izmir Metro, izay mitondra mpandeha 500 arivo isan'andro, dia 20 taona
Metro, latsaka velona ny fitateram-bahoaka any Izmir, 20 taona. Ny rafi-pitantanan'ny Metropolitan Munisipaly dia manakaiky ny antsasa-tapitrisa tapitrisa mpandeha isan'andro miaraka amin'ireo tsipika miady. Izmir Metro, izay nanomboka niasa tamin'ny 22 Mey 2000 tao Izmir, [More ...]
Gebze Darıca Metro dia mikasa hanokatra ny volana septambra 2023
Fikambanan'ireo tanàn-dehibe ao Marmara sy Kocaeli Metropolitan Municiel Assoc. Dr. Tahir Büyükakın dia nandinika ny asa fanamboarana ny Gebze-Darıca Metro Line, izay nafindra tany amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa, 52 metatra ambanin'ny tany. Fototra i Kocaeli [More ...]
Ku-Band Air Satellite Communication System, izay natomboka mba hamahana ny filàna fifandraisana an-tsokosoko ny zotram-piaramanidina tiorka tiorka ary namolavola tao anatin'ny sehatry ny tetikasa R&D nahavoky tena, [More ...]
Navoaka ny tatitra momba ny 'Lafatra fanokafana an'i Istanbul'
Ny Birao Mpanolotsaina siantifika IMM dia namoaka tatitra momba ny 'Stages of Opening for Istanbul'. Ao amin'ny tatitra; Tiorka dia fampihenana ny isan'ny maty amin'ny ankapobeny; na izany aza, voalaza fa tsy misy angona mahasalama momba an'i Istanbul. Fanaovana fanavaozana ny tatitra [More ...]
Tao anatin'ny lahateniny nandritra ny lanonana KIPT Silivri andiany faha-3 amin'ny sehatra fampandrenesana, ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu dia nanao antso toy izao ho an'ny Tale Jeneralin'ny Ali Kurt: “Hamonjy ny trano ataonay ianao. Tonga any izahay [More ...]
Taorian'ny fandefasana ny prototype dia mitohy ihany koa ny fandefasana ny vanim-potoana famokarana faobe, amin'ny volana May koa, taorian'ny fanaterana ny prototype ao anatin'ny tontolon'ny tetikasan'ny Famandrihana Momba ny fiarovana (mineKistika) (MKKKK) namboarin'ny MPG Makine Production Group. Famokarana milina MPG [More ...]
Nisy ny fanadihadiana natao mba hamaritana ny fiantraikan'ny dingan'ny pandrefesana amin'ny fihetsiky ny mpandeha sy ny fifamoivoizana any Istanbul. Ny fandalinana dia hampiasaina ihany koa mba hamaritana fomba vaovao sy handalinana ny fihetsiky ny mpandeha aorian'ny fipoahana. Istanbul Commerce University momba ny fitaterana [More ...]
Tao amin'ny fanambarana nataon'ilay Mpikambana BMC Board Taha Yasin Öztürk, naseho ny fanontana farany an'ny BMC Tulga. Hoy i Taha Yasin Öztürk: "Amin'ity dingana sarotra ity dia novokarinay, ary noraisina an-tsaina ny filàn'ny mpiambina anaty anay. [More ...]
Kadıköy Ferry Boat dia havaozina manomboka eo ambony ka hatrany ambony
Kadıköy-2 (Vaovao) Vaovao Ferry Port havaozina manomboka eo ambony ka hatrany ambany. Ny filazan'izy ireo fa te hampiasa pier ho toerana fivelomana sy fihetsiketsehana izy ireo, ny talen'ny tanàna AŞ General Manager, Sinem Dedetaş dia nilaza fa hanomboka ny fanavaozana any amin'ny piato hafa izy ireo. [More ...]
Covidien-19 ny fepetra rehetra noraisina tao anatin'ny faritr'i Tiorkia noho ny areti-mando, avy amin'i Eva mandeha eny an-dalambe mandritra ny 4 andro ary handany Ramadany ao an-trano. Istanbulites miaraka amina curfew izay hampiharina eo anelanelan'ny 23-26 Mey [More ...]
Ny tetik'asa 'Network Supported Talent' novokarin'ny ASELSAN dia nanaporofo ny saka-dia tamin'ny drill EURASIAN STAR'19 NATO. EURASIAN STAR (EAST) 2019 Fanatanjahan-tena, didy faha-3 amin'ny Corps, sivy ambin'ny folo any Istanbul miaraka amin'ny OMS Command and Force Structure [More ...]
Fanomezana fety ho an'ireo olom-pirenena mihoatra ny 60 taona avy amin'i Izmir Metropolitan
Izmir Metropolitan Munisipaly dia nanomana fonosana fety mba hanomezana fankasitrahana alohan'ny Fetin'ny Ramadany. Hozaraina ho 60 10 ny mponina Izmir mihoatra ny 60 taona. XNUMX taona handany ny fialan-tsasatra misaraka amin'ny olon-tiana noho ny curfew [More ...]
Fiaran'ny fiaramanidina an'habakabaka voalohany tao Torkia fa Bayraktar AKINCI tiha ny fivoarana nandritra ny volana maromaro nanehoana ny rakitra "AKINCI" 24 Mey 2020 Alahady, andro voalohany Ramadany, ny You Baykara amin'ny 20.23:XNUMX oraTube [More ...]
Karsan, mba hampitomboana ny fahombiazany amin'ny tsenan'ny fiara fitateram-bahoaka. Bozankaya Ny firaketana rehetra momba ny zon'ny lozisialy sy ny herinaratra izay mijanona ho zon'ny marika manokana izay an'ny tompony, izay misoratra anarana any Torkia sy any amin'ny tsena iraisam-pirenena ary [More ...]
Ny filankevitry ny fikarohana ara-tsiansa sy teknolojia any Tiorkia (TUBITAK) ao anatin'ny olona 15 dia hiasa. Araka ny fanambarana tao amin'ny Gazety ofisialy, olona 11 R&D izay miasa ao anatin'ny Space Technologies Research Institute (UZAY), [More ...]
Minisitry ny Fambolena sy ny Ala Bekir Pakdemirli, orinasam-pambolena fambolena lehibe indrindra any Tiorkia ao amin'ny tanànan'ny Sanliurfa Ceylanpınar State Farm 60 XNUMX ha, izay hitondra fampiasam-bola, nosokafana androany. Ministra Pakdemirli [More ...]
Fandaharan'asa fitateram-bahoaka amin'ny Andron'ny Arife sy ny Fety ao Izmir
Ny curfews dia hapetraka amin'ny alin'ny Ramadany sy ny Fetin'ny Ramadany. Mandritra ny fizotry ny 23-26 Mey; Ireo fiara fitateram-by ESHOT, Metro ary TCDD-İzmir dia manome serivisy fitateram-bahoaka hamoahana ireo vondrona matihanina sy mpiasa mpiasam-panjakana. [More ...]
Famaritana avy amin'ny MSB! Subpoena sy ny Transaction Transitions hambara avy amin'ny e-Governemanta amin'ny 28 May
Ny fampahalalana an-gazety dia nomena ny fepetra noraisina, ny hetsika mitohy sy ny olana mikasika ny fandaharam-potoanan'ny minisiteran'ny Fiarovam-pirenena, indrindra ny ady amin'ny fampihorohoroana, manohitra ny valan'aretina COVID19. Ao amin'ny fampahalalana nomanina amin'ny endrika horonantsary noho ny fivoahan'ny COVID-19 [More ...]